SAWIRRO: Barcelona oo dib u soo dhaweysay weeraryahanadeeda MSN – Gool FM
SAWIRRO: Barcelona oo dib u soo dhaweysay weeraryahanadeeda MSN
Byare January 3, 2017
(Catalonia) 03 Jan 2017. Barcelona ayaa dib tababarkeeda ugu soo dhaweysay weeraryahanadeeda MSN ka hor kulanka Copa del Rey ay San Mames kula yeelan doonaan Athletic Bilbao.
Lionel Messi, Neymar iyo Luis Suarez ayaa dhammaan dib uga soo laabtay fasax dheeri ah si ay u dhammeystiraan tababarka buuxa, iyagoo isku diyaarinaya kulanka ay khamiista la yeelan doonaan wiilasha Ernesto Valverde wareega 16-ka Copa del Rey.
Javier Mascherano ayaa sidoo kale dib ugu soo laabtay tababarka iyadoo uu Luis Enrique siyay shaxdiisa tababarka buuxa markii ugu horreysay sanadka 2017.
Kaliya goolhaye Jasper Cillessen ayaa ka maqnaa tababarka, maadaama goolwalaha reer Holland uu dhaawac kubka ah ku maqnaan doono labo usbuuc.
Barca ayaa kulanka Athletic kaddib la ciyaari doonta naadiga Villarreal horyaalka La Liga 8-da Janaayo.
Jurgen Klopp oo kulankiisii 50-aad hoggaamiyey Reds, Sturridge oo gooldhalintiisa xiriirka ah ee EPL sii wata iyo RIKOODHADII kale ee laga diiwaan geliyey barbarihii ay Liverpool xalay la gashay Sunderland
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay Man United ka gaartay kooxda West Ham ee Premier League… (Muxuu ka dhignaa kaarkii casaanka ahaa ee la siiyey Sofiane Feghouli?)